Salaamanews » MSF oo ka digtay cudurro halis ah oo ka dillaacayo Muqdisho
Home » Caafimaadka, Warar MSF oo ka digtay cudurro halis ah oo ka dillaacayo Muqdisho Print - Daabace: SalaamaNews - Nov 22nd, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Tallaalka Dabeysha oo ka bilowday MuqdishoDhaqtar Soomaali ah oo Muqdisho jooga ayaa in uu helay dawada cudurka HIV/AIDS Cudur halis ah oo ka dillaacay gobolka Jubada hooseDawooyinka waqtigooda dhacay oo laga isticmaalo Soomaaliya Deeq la gaarsiiyay Cisbitaalka Burco
(Salaamanews)-Warbixin ay soo saartay hey’adda dhaqaatiirta aan xuduuda laheyn ee MSF ayaa muujisay in wali xaalad nafaqo darro ay heysato carruur aad u fara badan oo ku jira kaamamka magaalada Muqdisho oo ay hey’addu dhabagal ku sameysay sida ay u noolyihiin carruurta ku jira kaamamkaasi.
Hey’adda oo tallaal iyo kaabayaasha aas aasiga u ah caafimaadka ka sameysay qaar kamid ah xiryaha barakacayaasha ayaa waxaa ay sheegtay in ololaheeda ay ku ogaatay in afar caruur ah ee kasta mid kamid ah uu halis ugu jiro inuu u dhinto caafimaad xumo.
Gargaar deg deg ah oo ay hey’addu ka sameysay shan maalmood 34-kaam oo ku yaallo Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa waxay ku sheegtay in nafaqo darradu ay aad u gu nugulyihiin carruurta ay sida bilaashka ah ugu dabiibyeen xiryaha ay booqdeen.
Carruurta da’doodu ka yartahay shanta sano ayay sheegtay hey’addu in dhibaatada ugu badan ay ku heysato Muqdisho, waxaana hey’addu ay xustay in wali xaalad xun ay heysato 15,000 oo barakacaayaal ah oo ceymis caafimaad u baahan.
Hey’addu waxay qirtay In 70 boqolkiiba ay xaalad xun ku heysato kaamamka Muqdisho, waxaana ay ugu baaqday dhamaan hey’adaha samafalka ee qaramada midoobay in garab buuxa ay siiyaan dadka dhibaateysan.
Hey’addu waxay intaa raacisay in 162 carruur ah oo daryeel loogu sameeyay xarunta hey’addu ay ku leedahay Xamarweyne la helay in 25-kamid ah u badkaasi ay Qatar ugu jiraan cudurrada halista ah ee maqaarka iyo kuwa kale..
Hey’adda MSF ayaa xarumo ku leh inta badan gobollada dalka Soomaaliya, waxaana dhawaan ay shaki galisay shaqadeedii ay ka waday mudada dheer cisbitaalka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiirraan.
Tags: caafimaadka, warar « Qoraalkii HoreMadaxweyne Xasan Shiikh oo Britain siiyay dhul ay ka dhisaneyso safaaradeeda Soomaaliya	Qoraalka Xiga »Maxkamada ciidamada Soomaaliya oo ka hadashay sababtay ay u xirtay wariyaha BBC-da ee Muqdisho	Halkan Hoose ku Jawaab